राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै के–के भने प्रधानमन्त्रीले ? (पूर्णपाठसहित) « Postpati – News For All
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै के–के भने प्रधानमन्त्रीले ? (पूर्णपाठसहित)
पोष्टपाटी पढ्न लाग्ने समय : १२ मिनेट
चैत २५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको पुस्ताले भोगेको गम्भीर चुनौतिमध्येको एक कोरोना भाइरसको महामारी रहेको बताएका छन् । विश्वले भोगेको यो संकटमा नेपाली जनताको तर्फबाट यसविरुद्ध लड्ने अभियानमा ऐक्यबद्धता रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बाँकी संक्रमितप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
उनले नेपालमा अपनाइको उच्च सावधानी र सतर्कताले हालसम्म ९ जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको भन्दै सरकारको अभियानमा सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका सम्बन्धमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ